သဘာဝရှားစောင်းလက်ပက်ဖျော်ရည် အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Myo Lay
👉အရေပြားရောဂါ အကြီးစား ဖြစ်နေသူများ
👉ဆီးချို သွေးချို ဝေဒနာရှင်များ ၊
👉ဦးနှောက်နှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါရှင်များ စသည်တို့အတွက် Side-effect လုံးဝမရှိတဲ့
💞💞FDAအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ Nutrinal Supplement ဖြစ်တဲ့ ရှားစောင်းလက်ပတ်နဲ့ ဂိုဂျီဘယ်ရီရောစပ်ထားတဲ့ သဘာဝဖျော်ရည်
👍S-Vera Plus Aloe Vera Juice (750ml)👍
ကို ထိုင်းဘုရင်ပိုင် ဆီရီရ ဆေးရုံကြီးမှ ပါရဂူကြီး ဒေါက်တာဆစ်ထဝီ က ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်
သဘာဝ Organic မြေသြဇာနဲ့ သေချာစိုက်ပျိုးထားတဲ့
သဘာဝရှားစောင်းလက်ပက်ဖျော်ရည်ကို အသက်ရွယ်ရလာသော လူလတ်ပိုင်း လူကြီးပိုင်းများ အတွက်
၁. အစာအိမ်အနာဖြစ်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေပြီး အစာအိမ်ရောဂါ မဖြစ်စေရန်လည်း ကာကွယ်ပေးသည်။
၂. ကင်ဆာနှင့်ဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းများကို
၄. အရိုးအဆစ်များကို သန်မာစေပြီး အူမကြီးနံရံများကို
၅. ဆဲလ်အသစ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်
၆. အပူကြောင့်ဖြစ်သော အနာကွက်များကို
ပျောက်ကင်းစေပြီး အရေပြားရောဂါများ ကိုအထူးကာကွယ်
၇. ကောင်းစွာအိပ်ပျော်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အား
ခန္ဓာကိုယ်၏ စနစ်များကို ကောင်းစွာလည်ပတ်စေသည်။
၈. သွေးထဲမှ သကြားဓါတ်ကိုထိန်းညှိပေးပြီး
၉. ဦးနှောက်ကို ထက်မြက်စေပြီး ဦးနှောက်နှင့်ပတ်သတ်
၁၀. အသားအရေကိုစိုပြေလန်းဆန်းစေပြီး Collagen နှင့် Elastic များ ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့် အသားအရေကို
၁၁. မျက်စ်ိနှင့်ပတ်သက်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်ပေး
၁၄. အနာများကိုလျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းစေသည်။
Allergic ဖြစ်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Side-effect လုံးဝမရှိတဲ့ ဂိုဂျီဘယ်ရီနဲ့ ရှားစောင်းလက်ပတ်ဖျော်ရည်လေး ကို
တကယ်ကို ဆိုးကျိုးလုံးဝမရှိပါဘူး ။
မိတ်ဆွေတွေအားလုံး Side-effect ကင်းကင်းနဲ့
ဂိုဂျီဘယ်ရီ ရှားစောင်းလက်ပတ် ဖျော်ရည် ကိုမည်သည့်ရောဂါရှိသူမဆို သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်
ဈေးနှုန်း- 49500 ks
အသေးစိတ်မေးမြန်းရန် ပေ့ရဲ့ message box
အသင်းဝင်ပြီး ဝယ်ယူပါက အသင်းဝင်ဈေးနဲ့ရပါတယ်